Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » कतारपछि महत्त्वाकांक्षी योजनामा नेपाललाई फकाउँदै साउदी, नेपालले कसको समर्थन गर्ला ?
कतारपछि महत्त्वाकांक्षी योजनामा नेपाललाई फकाउँदै साउदी, नेपालले कसको समर्थन गर्ला ?
काठमाडौँ । साउदी अरेबियाले सन् २०३० को एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने अवसर पायो भने नेपालजस्तो देशलाई अत्यधिक फाइदा पुग्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।
यो हो, अबको १० वर्षलाई ध्यानमा राखेर ‘स्पोर्टस् एकेडेमी’ र ‘एसियन स्पोर्टस् कन्फेडेरसन’ स्थापना गर्ने । विशेषतः एकेडेमीको योजना लोभिने खालेको छ । त्यसअनुसार एसियाका सबै देशका खेलाडीले त्यसमा अभ्यास र प्रशिक्षणको मौका पाउनेछन् । अनि प्रतियोगिता सुरु हुन ठीकअगाडि खेलाडी आफ्नो सम्भावित प्रदर्शनको उत्कृष्ट मोडमा हुनेछ । त्यो पनि ओलम्पिक बराबरमा ।
साउदी अरेबियाले अगाडि सारेको नारा पनि उत्तिकै गज्जब छ । यसले भन्छ, ‘उपस्थिति, सहभागिता र प्रसिद्धि’ । वास्तवमै पूरा योजना कस्तो छ त ? त्यसको कम्तीमा छोटकारीमा जानकारी पाउने अवसर पाए, नेपाल ओलम्पिक कमिटीले । कमिटीको सातदोबाटोस्थिति कार्यालयमा शनिबार नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत मुसाउद अल आरवे आइपुगे र उनले दुई घण्टा बराबर कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राजवैद्य र महासचिव नीलेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गरे ।
यसअघि साउदी अरेबियाको ओलम्पिक टोली नै नेपाल आउने तयजस्तै भएको थियो, तर अन्तिम अवस्थामा मिलेन । नत्र साउदी राजपरिवारका दुई सदस्यसम्मिलित ओलम्पिक टोली नै सातदोबोटो पुग्ने थियो, जसरी यसअघि कतारको ओलम्पिक टोली आफ्नो निजी विमानमा एक दिनकै लागि भए पनि काठमाडौं आएका थिए । प्राविधिक कारणले त्यो सम्भव भएन ।
तर साउदी ओलम्पिक कमिटीको सन्देश बोकेर राजदूत आरवे सातदोबोटोस्थित एनओसी मुख्यालय पुगे । त्यस क्रममा उनले नेपाली खेलकुदका लागि निकै फाइदा हुने प्रस्ताव नै अगाडि सारेका छन् । त्यसको बदलामा नेपालको सहयोग तथा समर्थन खोजेका छन्, त्यस सन् २०३० को एसियाली आयोजनाको मतदानमा आफूलाई समर्थन गर्न ।
आयोजनाको अधिकार दौडमा रहेको त रियाद र दोहा नै हो । अर्थात दुई छिमेकी देशका राजधानी । डिसेम्बर १६ मा एसियाली ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभामा मतदान हुनेछ । दुईमध्ये एक सहरले त्यस एसियाली खेलकुद आयोजनाको अवसर पाउने छ । त्यसको ४,५ दिन अगाडि भने खेलकुद कूटनीति आफ्नो चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । कतारमात्र होइन, साउदी अरेबिया पनि नेपाललाई फकाउन चाहन्छ, नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ ।
अब मूल प्रश्न नेपालले कसको समर्थन गर्नेछ त ? वा भनौं, नेपालले कसको पक्ष लिँदा फाइदा हुन्छ त ? अध्यक्ष श्रेष्ठसँग त्यसको पनि कूटनीतिक उत्तरमात्र छ । उनका अनुसार भेटवार्तामा खेलकुदको माध्यमबाट पारस्परिक सहयोगका लागि कुराकानी भएको छ । उनी मान्छन्, साउदी र कतारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव तुलनात्मक रूपमा लगभग उस्तै छ, तर केही राम्रो भने साउदीकै हो ।
श्रेष्ठकै भाषामा भन्दा ‘साउदीले सन् २०३० को एसियाली खेलकुदको आयोजना अवसर पायो भने नेपालजस्तो देशले प्रतियोगितामा भाग लिँदा भ्रमणका क्रममा जति खर्च हुन्छ, त्यसमध्ये अधिकांश उसले नै बेहोर्न तयार छ ।’ अझ सहयोगको यो क्षेत्र अझ ठूलो हुनसक्छ, नेपालका लागि दीर्घकालीन फाइदा हुने सहयोगसमेत हुनसक्छ । त्यसमाथि ‘स्पोर्ट्स एकेडेमी’ को चर्चा आफ्नै ठाउँमा छ ।
साउदीले यो मौका साँच्चै पायो भने यसको स्तर ओलम्पिक सरह नै हुनेछ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मस्कटमा हुने साधारणसभाका बेला दुवै देशका ओलम्पिक कमिटीसँग थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि मात्र नेपालले कसलाई मतदान गर्ने हो भनेर अन्तिम निर्णय गर्नेछ । उनी भन्छन्, यो निर्णय नेपाली खेलकुद र खेलाडीको हित तथा स्वार्थ मुख्य आधार बनाएर नै हुनेछ ।
साउदी अरेबियाका ओलम्पिक पदाधिकारी सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा । तस्बिर : कान्तिपुर
प्रकाशित मिति December 13, 2020
युएईले २४ घन्टामा एकलाख ३८ हजार जनालाई कोरोना खोप लगायो
युएईमा एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमीत थपिए
कोरोना खोपको ९५ प्रतिशत मात्रा यि १० मुलुकमा सिमित : डब्लुएचओ
एअर अरेबियाले शारजाह-दोहा सिधा उडान पुन: सुरु गर्दै